22 April, 2019 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Mudane C/LLaahi Barbaar oo ah safiirka iskii isudiray kana madaxbanaan gabi ahaan siyaasadda labadaraalana ah ganacsade wayn si wanaagsan looga yaqaan daafaha dunida gaar ahaan qaaradaha Afrika iyo Aasiya ayaa si aan caadi ahayn loogu soo dhoweeyay w
Mudane C/LLaahi Barbaar oo ah safiirka iskii isudiray kana madaxbanaan gabi ahaan siyaasadda labadaraalana ah ganacsade wayn si wanaagsan looga yaqaan daafaha dunida gaar ahaan qaaradaha Afrika iyo Aasiya ayaa si aan caadi ahayn loogu soo dhoweeyay waddamada Switzerland iyo Austria isagoona ku sii jeeda dalal badano dhawr ah ee kulaala qaaradda Yurub.
Mudane Barbaar oo ka soo kicitimay dalka Qadar islamarkaana cagta soo mariyay waddamo badano dunida Carabta ka tirsan ayaa ugu dambayntii gelinkii dambe shalay soo gaaray Zurich International Airport, isagoona salka dhulka dhigin loo sii gelbiyay goobaha martisharafta sarsare lagu soo dhoweeyay, waxaana aakhirkii sheekooyin iyo marxambayn farax siyaadaa leh dabadeed loo soo qaaday hudheelkii loogu talagalay inuu ku nasto.
Safiirkan isdiray cidina aan dirin inbadana gargaara guud ahaan Soomaalida kolkay soo gaadho dalka Qadar Mudane C/LLaahi Barbaar ahna runtii muwaadin u dhashay Koonfurta Soomaaliya, ayaa soo dhowayntiisu aanay u kala harin walaalaha Soomaalida ayna hormood ka ahaayeen tiimka warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan Southern Media Co-Operation.
Mudanaha waxaa hareerihiisa lagu arkayay madaxa guud ee saxaafadda Koonfurta Soomaaliya Dr C/LLaahi Ibraahin Xasan Amaandhoorey, Mudane Cali Deeq iyo Ustad Adam Increase, waxaana dhamaantood wajiyadooda laga dheehan karayay farxad aad u ballaaran, taasoo uga dhignayd mid taariikhi ah noloshooda soo marta inay la kulmaan soona dhoweeyaan mudanahan qaaliga ah magaca miskiinka aan ka ahayn Mudane Barbaar.
Guntii iyo gabangabadii soodhawntii ganacsade C/LLaahi Barbaar ee qaaraddan Yurub ayaa waxay bilow u tahay martisooridda daafaha dunido dhan loogu fidinayo todobaadyada soo socda haddii Alle idmo.
Togba taaggiisu rogmadaa amar Alle laakiin!!